Spam တွေပြန်ထလာပြီ — MYSTERY ZILLION
မူလ › Sharing › Tech News
December 2008 edited December 2008 in Tech News
နှစ်ပတ်လောက် စပန်ပို့နှုန်းတွေ ၇၀%လောက်ကျသွားရကနေ၊ အခုပြန်ပြီးတက်လာပါပြီခင်ဗျ။
spam creators တွေက သူတို့ရဲ့ command center ကို Estonia(Northern Europe) ကိုပြောင်းလိုက်တယ်လို့ ထင်ရပါတယ်ခင်ဗျ။
mm_legend wrote: »
ကြုံကြိုက်လို့ Estonia ( Estonia ကို Easten Europe လို့ တချို.ကသုံးတယ်ခင်ဗျ။ Soviet Union ( USSR ) ကနေ ခွဲထွက်လာတဲ့ နိုင်ငံမို့လို့ ) မြေပုံလေး တင်ပေးလိုက်တယ် .... လှလို့ ... :):)
Hote Pa shin, Spam mailer don't know I amagirls and sending links of medicine that are for Men only.:P:39::)):)):)):((:((
Blocking made me head ached and I facedalot of problems with my seniors becaused they told me why do they got junks mails from everywhere.
Why can't I block that junk mails and why don't I know how to block spam mails. Asking don't teach you in your University?:)):)):)):))
My answer is at that time Myanmar has no internet and my teacher doesn't know about spam mails therefore they don't teach me how to block that junk mails.:P:P:P:P:P
အော် မစိုးရိမ်ကြပါနဲ့ဗျား တစ်လနေရင် automatic ဖျက်ပေးသွားပါလိမ့်မယ် မယုံရင် ဂျီမေး အကောင့် အသစ်တစ်ခုလုပ်လိုက် ပြီးရင် Spam ေ၇ွှးလိုက် တွေ့ပါလိမ့်မယ်
gmail ဂတော့ ဟုတ်တာပေါ့ g မဟုတ်တဲ့ Bagan MPT email တွေကိုပြောတာရှင့်။ အီး လေ အီး သိတယ်ဟုတ် နာလည်းနာသေး နံ လည်းနံသေး ဆိုတာလို။ ဖေါက်လည်းဖတ်သေးပီတော့ကာယကံရှင်ဆီကိုလည်းဆက်မပို့ဘူး။
ကြုံကြိုက်လို့ Estonia ( Estonia ကို Easten Europe လို့ တချို.ကသုံးတယ်ခင်ဗျ။ Soviet Union ( USSR ) ကနေ ခွဲထွက်လာတဲ့ နိုင်ငံမို့လို့ )
ဥပမာ။ ။ Alexender ဆို ရုရှားကပြား
အမကျနော် မေးချင်လို့နော်။ အဲဒီဟာကြီးကို မကောင်းမှန်းသိရဲ့နဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ဆက်သုံးနေရတာလဲဟင်။ သူ့ထက်ပိုလုံခြုံ၊ space ပိုများ၊ free လဲရတဲ့ gmail ရှိနေတဲ့ဟာကို။ ပြီးရင် gmail ကကြိုက်သလောက်လဲ ဖွင့်လို့ရတယ်။ တချို့ ဆို gmail free ရလို့ ဖွင့်ထားလိုက်တာ သူ့ခေါင်းက ဆံပင်ထက်တောင်ပိုများသေးတယ်။ Google ကတော့ ဂုဏ်ယူနေတယ်။ သူ့ email သုံးတဲ့ users ကဘာမှာ တတိယအများဆုံးဆိုပြီး။ အမှန်သူတို့မသိတာ သူတို့ရဲ့ ဖောက်သည်အများစုက ဘန်းကျော်သားတွေ ဖြစ်နေတာကိုပဲ။:P
အမှန်ပဲ၊ ကျနော်တို့ တစ်အိမ်တည်းမှာပဲ အားလုံး အကောင့် ၇ခုရှိတယ်။ အဖိုးနဲ့အဖွားကိုတောင်တစ်ခုစီ ထပ်ဖွင့်ပေးဖို့လုပ်နေတယ်။ ဘန်းကျော်သား၊ အလကားရရင် သွား ဖြဲ မကြည့်ဘူး။ :d